Ogaden News Agency (ONA) – Agoonta Ogadeniya ee kunool xerada IFO oo lasoo Gaadhsiiyay Deeq lacageed oo kasoo Gaadhay jaaliyadaha Ogadeniya Ee Qurbaha.
Agoonta Ogadeniya ee kunool xerada IFO oo lasoo Gaadhsiiyay Deeq lacageed oo kasoo Gaadhay jaaliyadaha Ogadeniya Ee Qurbaha.
Posted by Wariye Qaran	/ May 4, 2018
Maanta oo ah maalinimo jumco ah taariikhduna kubeegantahay 05/05/18 Agoonta reer Ogadeniya ee kudhaqan xerada IFO ee deegaanka dhadhaab waxaa lasoo gaadhsiiyay deeq lacageed oo kasoo gaadhay jaaliyaadka Ogadeniya ee dibada.
Maamulka faraca M.xorriyo oo ay weheliyaan laanta Agoonta iyo waliba laanta Qoxootiga Ogadeniya ee ORC ayaa subaxnimimadii saaka isugu yeedhay qoysaska goonta ah ee reer Ogadenia kuwaasi oo ay dhibaatooyin kasoo gaadheen fatahaadihii dhawaantan kadhacay xeryaha qoxootiga Dhadhaab gaystayna khasaarooyin kala duwan.
Hadaba bulshada soomaalida Ogadeniya oo kucaan ah in ay is caawiso iskana garab qabtaan waxkasta oo culays ah ayaa sameeyay gurmad lacageed oo loogu talagalay in lagu caawiyo ogoonta Ogedeniya ee kudhaqan Ifo.
barnaamijkan waxaa kamahad celiyay dhamaan dadkii goobta yimid oo ay ugu horeeyaan masuuliyiinta faraca, laamaha aan kor kusoo xusnay iyo wiba bulshadii deeqda lagaadhsiiyay iyagoo kubogaadiyay shaqada ay qabteen jaaliyaadka dibada ee sida iskood ah isu xilqaamay waxayna sidoo kale kubooriyeen in lajoogteeyo caawinta bulshada uu gumaysigu naafeeyay ee uu ugaystay dhibaatadooyinka aan lakoobi Karin ee sababay in ay kunoolaadaan xero qoxooti ayiga oo aan haysan hoy iyo nolol fiican oo ay iskaga fillaadaan dhibaatooyinka soo gaadha .